Ezinaụlọ, egwuregwu oge na ihe niile ị na-echere gị na Mgbapụta Mgba Ọla | Gam akporosis
Clans, egwuregwu n'ịntanetị na ezigbo oge na ngwa ngwa niile nke saga a na-echere gị na Mwakpo Metal Slug
Manuel Ramirez | | Emelitere na 20/02/2020 18:33 | Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Ngwongwo igwe bu a arcade ụdị vidiyo egwuregwu usoro na otu n'ime ndị na-agbapụ 'em nke mere aha maka onwe ya n'ihi igwe egwu egwuregwu vidiyo SNK na Neo-Geo. A usoro nke edere pixel art di n'ogo ya kacha elu ma wetara anyi udiri nke animations, obu ezie na odighi adi nma, na egosiputa ihe omuma. Saga dị oké mkpa iji mata ụwa nke egwuregwu vidio na nke ahụ bụ ihe niile dị na ụdị ahụ e kwuru n'elu nke oge ịse 'em ruo iji wetara anyị arcades ebe omume ngwa ngwa na ihe odide nwere ọtụtụ ọchị jisiri ike mee anyị ezigbo ọchị mgbe anyị gwuru egwuregwu ụfọdụ.
Ọ bụrụ na anyị nwere Metal Slug Defense Dị ka ụlọ elu nke anyị na-agbapụ nkeji iji bibie ntọala ndị iro, ugbu a SNK amalitela Mwakpo Metal Slug. Egwuregwu vidio mepụtara site na ncha maka ngwaọrụ mkpanaka ma nke a bụ ihe ngosi oge mbụ anyị malitere ya na ama anyị. Ngwongwo Ngwongwo nke ihe ndi ahu nwere otutu agba na ihe nile nke meworo ka ihe omuma a bu ihe otutu otutu ihe ntaneti nyere otutu nde ndi egwuregwu n'uwa nile. Ka anyị kwuo na nkeji ọhụrụ a dị ka mmụba nke Mpempe akwụkwọ Metal Slug nke enwere ike ịmepụta agbụrụ, ịsọ mpi ozugbo na egwuregwu asynchronized, na nke ahụ n'etiti ụfọdụ n'ime omume ọma ya kachasị mma bụ maapụ na-adịgide adịgide ebe ị nwere ike imeri ntọala nke ndị egwuregwu ndị ọzọ na-ewere.
1 Naanị ihe ngosi dị egwu
2 Ọgba agha
Naanị ihe ngosi dị egwu
Na e mepụtara ya site na ncha maka ngwaọrụ mkpanaka, pụtara na na-ewe uru nke ngwaike niile ịhapụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ijuanya na njirimara na ụda dị mma. Ngwongwo nke ngwongwo nke igwe choro iwere ihe bu ihe omuma ya na ọkwa ozo tinyere ntinye nke ihe di iche iche nke gha enyere gi aka itinye ya ogologo oge. Nsonye nke agbụrụ, map na-adịgide adịgide na egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na ezigbo oge bụ àgwà atọ na-enye ya ọtụtụ mma n'onwe ya.
Banyere egwuregwu, ọ na-agbaso otu akara ahụ dị ka onye bu ya ụzọ, na-agbachitere ụlọ elu na njikwa dị mfe na ihe odide 2D ndị ahụ na-agagharị na isi nke otu ndị na-emegide ya iji kpochapụ ya na akpaghị aka. Anyị ga-elekọta maka ịmepụta ọtụtụ nkeji, mepụta ndị anyị nwere wee nweta ndị ọhụụ nke ga - enyere anyị aka ibibi ndị isi anyị ga - enwe na maapụ ụfọdụ.
Ma nke ahụ bụ ndị ahụ ikpeazụ bosses bụ ihe ọzọ na stampụ njirimara nke ngwongwo nke metal, yabụ kwadebe ihu ụfọdụ akụkụ ndị gaferela. Omume ya ọzọ bụ ụdị ọrụ dị iche iche dị ka egwuregwu egwuregwu ahụ ebe ndị egwuregwu nwere ntọala ndị agha ndị ọzọ nwere.
Ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-egbu oge ụfọdụ kwalite nkeji, mepụta ha ma rụọ ọrụ ikike ha pụrụ iche n'ịlụ ọgụ, ebe nke ọ bụla ga-enwe ike nke iji mebie ihe ka ukwuu.
Ma abia na ntanetị, ọ dị mma kwesịrị ịrịba ama "Real Oge Agha" mode ma ọ bụ ezigbo oge ọgụ, nke ndị egwuregwu anọ nwere ike igwu egwu n'otu oge yana ruo bọọdụ 6 ebe ha nwekwara ike igwu egwuregwu egwuregwu asynchronized. Na ọnọdụ a ị ga-enwe ọ aụ dị ukwuu n'ihu gị na-anwa ịghọ onye ọkpụkpọ kacha mma n'ụwa.
O nwekwara nkata nhọrọ n'okpuru usoro egwuregwu "Guild Raid" na "Special OPS". Omume pụrụ iche iji nweta ọtụtụ awa nke egwuregwu vidio a nke bịarutere na gam akporo ụbọchị gara aga maka ọ theụ nke ndị na-akwado ụdị ụdị arcade a na-agba ọsọ ọsọ.
Got nwetara ya n'efu site na Storelọ Ahịa Play na-apụghị izere ezere na-ngwa ịzụrụ. Akwadoro nke ọma maka ụdị egwuregwu niile.
Ngwongwo Ngwongwo nke metal na-anọchi anya ya magburu onwe ọgwụgwọ na ndịna-emeputa jiri nka pikselụ nke ruru ogo ya kachasị elu na aha SNK a. Yi pikselụ, fun animations, n'ụzọ zuru ezu e mere nzụlite na gburugburu na a dum usoro nke teknuzu ọcha na-ekwe ka anyị na-abịa n'ihu a oké video egwuregwu. N'ime aha ndị ahụ, n'oge ya, n'okpuru igwe egwuregwu vidiyo, ga-etinye uche ọtụtụ ụmụaka n'akụkụ onye na-egwu egwu.
Ọ bụrụ na ị masịrị Metal Slug Defense, na Attack ị ga - enwe video egwuregwu mepụtara site ọkọ maka ngwaọrụ mkpanaaka nwere nghọta pụrụ iche. Echefula ya.
Mwakpo Ọkpụkpụ Metal
Ihe omuma gi
Nnukwu ihe ntanetị
E mepụtara nke ahụ site na ọkọ
MGBE MGBE NA-EME
Developer: NKWỌ SNK
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Clans, egwuregwu n'ịntanetị na ezigbo oge na ngwa ngwa niile nke saga a na-echere gị na Mwakpo Metal Slug
Ihe ndị a niile bụ akụkọ anyị ga-ahụ na MWC 2016
Etu ị ga-esi weghachite faịlụ ehichapụ na MicroSD ma ọ bụ nchekwa nchekwa ọ bụla, bụrụ Pendrive ma ọ bụ diski ike